Maxaa ka Jira in Guriga Sheikh Shariif Ciidamo la dul geeyay ? Hadalkii FIQI iyo Jawaabta Xukuumadda | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Maxaa ka Jira in Guriga Sheikh Shariif Ciidamo la dul geeyay ? Hadalkii FIQI iyo Jawaabta Xukuumadda
Mar 24, 2020 - 8 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Waxaa soo baxay Warar sheegaya in Ciidamo la dul geeyay Guriga uu Muqdisho ka degan yahay Madaxwaynihii Hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sh. Axmed, Waxaana sidoo kale Warkaasi oo aan la Xaqiijin meel Rasmiya oo laga soo xigtay Shacabka la wadaagay Qaarkamid ah Siyaasiyiinta Mucaaridka ah.
Xildhibaan Axmed Macalim FIQI oo Arintaasi ka hadlaya ayaa yidhi “Guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxwaynihii hore ee dalka ahna guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo habeenadaan danbe ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray ay daandaansiga agagaarka gurigisa ku samaynayeen ma waxaa gashay doorashadii 2020/2021 mise hawlgalkii muddo kororsigii maxaxweyne Farmaajo raadinayey ayaa laga baadigoobayaa oo ku dhuuntay?
Midday ahaataba ma ahan tallaabo wanaagsan ama dhaqan dawladnimo, waxaan kula talinayaa madaxweyne Farmaajo In uu joojiyo daandaansiga iyo abuurista xaalad dagaal oo aan hadda taagnayn oo caaqibadeeda danbe aan la mahdin doonin!” Ayuu yidhi FIQI.
Dhinaca kale Dawladda Soomaaliya oo ka hadashay Wararka Suuqa la geliyey oo Dhibaatada iyo Colaada ka Abuuri kara magaalada Muqdisho, ayaa sheegtay inaysan waxba ka jirin Arintaasi.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa beeniyay wararka sheegaya in Ciidamo la dul dhigay hoyga Madaxweynihii hore Sheekh Shariif.
Waxaan ugu baaqayaa Soomaalida iyo gaar ahaan dadka mas’uuliyiinta ah inay iska hubiyaan wararka ay bulshada la wadaagayaan ee keeni kara kicin colaad iyo Amni darro”ayuu yidhi Wasiir Ducaale.
Jawaabta Dawladdu waxay meesha ka saaraysaa eedayntii iyo Wararkii ay Faafiyeen Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Xukuumadda Soomaaliya.
Mayee,waxaa ciidanka lagu soo tababaray Kenya kkk
Waa Mooryaan dadkooda dabka saara,oo cunayay 91-kii ilaa uu Cabdulaahi Yusuf ugu ymid oo cagta mariyay.
Awal Ethopiya ayay dadka ku wareerin jireen,haatan Areteeriya kkkkk
Markaad eegto dadkani waxaabad is-odhnaysaa – waar ninkaasi wax badan ayuu ogaa.
Kumaad quusan SADEX madaxmeyne oo jifidooda shiranaya oo ka kaca leh caalamka meel ay dunida waxaasi ka dhacaan ma maqal, cidii naga xog ogaalsani hanoo sheegto..
Dhaqanka ayaa ka wayn madxnimada ay Mareen.
Qooyska,ayay ka soo bilaabantaa bahashu.
Degaanka ayay zoo martaa.
Maxaa Layska qaadaakkkkk
Madaxa aa fujihaakkk
Soomali jecel says:
Ninkan waxaa lagu sheegaa in uu yahay xildhibaan waase xildhibe ay dhibaataynayso Doller-ka xad dhaafka ah ee uu ku qaato bil walba booskaas.
Waa Nin si xad gudub ah u dhibaataynaaya Madaxda ugu sareysa dalka oo uu u arko Laf-dhuun gashay uuna liqi la yahay, iyadoo ay ka dhaadhi la dahay wax qabadka xawliga u socda iyo is qabqabsi la’aanta Madaxweyne iyo Ra’sa Wasaare wada jira 3 sanno . Waa xaasidnimo beenlow isku dir ka dhistay shaqadiisii loo idmaday.
Daanyeerimada Axmad Fiqi waxaan ka baqahayaa inay galaafato noloshiisa.
Waar daanyeertan kala ah Fiqi, mahad salaad iyo CC shakuur may ku daydaan daanyeerkooda ka wayn ee Cumar Cabdirashiid ee ay u shaqeeyaan…mase waxaan idhaahdaa hoosta wax ka wata.
Ilaa goormaa ayay wadai karaan dhirqaan dhabashadan.
Waxaad moodda inay dowladda u shaqeeyaan. Waayo caqli xumidooda waxay credibility ama macna u yeelaysaa Villa Somalia madaxdeeda iyo wasiiradeeda.
Tolow berri maxay la shir tegi doonaan
Arintaan anigu waxaan u fahmay arin layskaga horkenaayo madaxda somaliyeed.
Madaxeyne shariic iyo madaxweyne xasan sheekh.
Xishmad iyo karaamo ayey ka mudan yihiin shacabka somaliyeed. Doqonna loo sheegimaayo.
Maaha waxa dhici karo ciidanka dowladdu in ay dhibaato u gaystaan madaxdii xuriyo somaal.
Waa wuxuush wuxu ee madaxweynayaal maaha sababtoo dhaqankoodaad ka garansysaa inay mooryaan tihiin.yey fawqul tey
Dagaalkan uu maalin walba iclaamiyo ninkani ma ka dhabbaa mise waa ka boolo-xoofto?.
Xildhibaannadu miyayna dawladda ka tirsanayn horta, sharci qabtaase ma jiraa?…